North East India Hill Station Tour. Kpọọ + 91-993.702.7574 maka ntinye akwụkwọ
Ọ bụrụ na ị bụ onye na-ahụ n'anya na-achọ inweta ala nke ugwu na ndagwurugwu na-adịghị na-ekpuchi akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, mgbe North East India Hill Station Tour bụ maka gị. N'ibu 7 kwukwara na a na-akpọ 'Ala nke Nwanyị Asaa', North East India bụ ihe na-eme nleta maka ụdị njem ọ bụla. Sand Pebbles 'nyere North East India Hill Station Tour kacha mma ahịa. Gburu oke ohia kachasị oke, ebe obibi ndi mmadu oge ochie, ugwu ugwu snow, ndagwurugwu di iche iche, mmiri na-egbuke egbuke, na mmiri mmiri ozuzo, nke obula nke North East
India chere na ị nọ na Wonderland. North East India Hill Station Tour nwere ike ịbụ onye ọ bụla njem fantasy. Ọ nwere amara nke ya ga-ekpochapụ gị n'ụkwụ gị! Ugwu ugwu North East Indian Hill A na-ejupụta n'ugwu ndị mara mma, ahịhịa ahịhịa ndụ na-echekwa ọtụtụ puku iberibe ala na ugbo. Ị ghaghị ịme atụmatụ njem maka North East Hill Stations maka ahụmahụ ahụ dị ụtọ.
Ala ọ bụla nke North East India nwere ụdị ịma mma dị otú ahụ na ihe ịtụnanya dị egwu nke na ọ na-ahapụ ndị njem niile na-achọsi ike na ndị nwere obi ụtọ. Iji hụ na ị nwere ahụmịhe kachasị mma na North East India, hụ na ị nwere onye njem dị ka Pebbles Sand, onye na-agbasi mbọ ike inye ihe kachasị mma n'ime ihe niile. Anyị na-enye ndị kacha mma North East India njem nchịkọta.
Ngwakọta ngwugwu anyị maka ezumike Ezumike bụ ihe kacha mma maka ihe ọ bụla mere ị ga - eji mee njem ma ọ bụrụ na ị bụ onye njem na - ahụ maka ya ma ọ bụ naanị onye chọrọ ịnọdụ ala, zuru ike ma nwee obi ụtọ n'ụwa. Ịga njem na-eme ka mmadụ bịarukwuo nso ka ha na-enyocha ihe ọnụ. Bịa ime ka ezumike nrọ gị bụrụ eziokwu na Sand Pebbles 'ịtụnanya Tour na North East Hill Stations.
Mmemme 09 nke ehihie
Shillong dị ọcha
Mmemme 03 nke ehihie
Mmemme 07 nke ehihie
Mmemme 05 nke ehihie